#BlogIndiana: Jason Falls, Bloggers iyo ilaahyada Google | Martech Zone
#BlogIndiana: Jason Falls, Bloggers iyo ilaahyada Google
Khamiis, Agoosto 13, 2009 Isniin, Disembar 29, 2014 Douglas Karr
Waxay ahayd bilow wanaagsan maanta blog Indiana, Iyo Jason Falls waxay bilaabeen cabitaanada qulqulaya iyagoo hoos u dhigaya muhiimada ay leedahay in la helo mashiinka raadinta, shaki yarna laga saaro ghostblogging, iyo lahadlida dadka wax qora ee wax qoraya inay caadi tahay inaan la raacin sharciyada Muhiimadda Jason waxay ahayd mid qoto dheer oo qoto dheer… laakiin kuwani waa waxyaabaha ku xayiran gurigeyga.
Ugu yaraan mid ka mid ah saaxiibbaday ayaa dareemi kara falcelintayda… waana dareemay laba xayawaano gadaashayda fadhiyo markaa waan hubaa inaan ogahay waxa ay ka fikirayeen!
Ma u maleynayaa in dadka wax qoraya ay tahay inay raacaan xeerarka?
Waxaan ku raacsanahay 100% Jason! Ma jiraan wax xeerar ah. Waxay la mid noqon doontaa Alexander Graham Bell oo soo saaray buug ku saabsan sida loo isticmaalo taleefannada dhowr sano ka dib markuu abuuray. Bogagga shabakaddu wali wuu yar yahay waxa adiga kuu shaqeeyana uma shaqeyn karaan kuwa kale. Akhristayaashaydu horeyba way ogyihiin sida aan u dareemayo baraha bulshada waa been xeerarkuna waa been.
Ma lihin sharciyo… waxa aan haysanno, in kastoo, aan khibrad u leenahay dhexdhexaadnimada iyo aqoonsashada waxa shaqeeya iyo wixii aan shaqeynayn si aan ugu gudbinno aqoontaas kuwa kale si ay u tijaabiyaan.
Miyay Bloggers iska indha tirayaan raadinta?
Chris Baggott wuxuu ku dhawaaday inuu ka soo baxo kursigiisa markii Jason uu soo jeediyay inuusan ka walwalin raadinta. Wuxuu weydiiyay su'aal isku mid ah oo casiir leh, "miyaadan dadka u sameynaynin wax xumaan ah adigoon haysan waxyaabaha aad ka kooban tahay" waxyaabaha aad u badan… laga helo raadinta? ". Dabcan Jason sidaas uma uusan fikirin.
BTW: Tani ma ahayn dood dhan - kaliya dood caafimaad leh oo ku saabsan xeeladaha wax lagu qoro. Jason wuxuu qabtay shaqo fantastik ah wuxuuna ahaa mid hufan oo ku saabsan sababta uusan ugu baahnayn inuu ka walwalo raadinta. Su'aasha Chris waxay ahayd mid runti kor u qaadeysa qodob ansax ah, in kastoo. Haddii ay jiraan baarayaal halkaas jooga oo ku raadinaya… oo ay ku heli kari waayaan, miyaanay dhibaato ahayn?
Dhibaato ma ku tahay makiinadaha wax raadinta? Mise waa dhibaatadaada?
Jawaabteydu waxay noqon laheyd inay tahay dhibaatadaada. Google wuxuu si aad ah ugu deeqay bixinta dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah dadka si ay u fahmaan sida loo hagaajiyo labadaba bogooda iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Google xitaa waxay nagu siisaa darajooyinkeena ereyga muhiimka ah ama weedha, iyo mugga raadinta ee ereyada muhiimka ah ee la yiri - iyadoo garaneysa in kuwa doonaya inay ku tartamaan tartankan ay u baahan yihiin inay wax ka beddelaan.
Waan necbahay inaan u ciyaaro ilaahyada Google sida qof kale. Waxaan jeclaan lahaa inaan qoro nuxur ku qasbaya mana aanan ka walwalin inaan xuso ereyada muhiimka ah, ereyo isku mid ah, iyo iskuduwaha ereyada muhiimka ah ee ku jira mawduucayga. Waan sameeyaa, in kastoo, markaa dadka raadinaya jawaabahan ay ka heli doonaan balooggeyga! Oo iyaga ka heli ay sameeyaan!
Waa wax walba oo ku saabsan kartida! Miyuu Social Media Explorer sifiican u shaqeeyaa? Haa dabcan. Jason miyuu ka helayaa la-talin iyo ka-qaybgallo ku hadla bogiisa? Haa wuu sameeyaa. Laakiin waxaa jira Jason fursad uu ku helo taraafiko badan iyo weydiimo cusub adoo si fudud ugu fududeynaya waxyaabaha ku jira boggiisa. Kuma talinayo inaan ku hadlo si aan dabiici ahayn - kaliya waxaan dhigayaa ereyada muhiimka ah iyo jumladaha ay labaduba macnaha u leeyihiin ayna soo jiitaan taraafikada raadinta. Fudud baloog loogu talagalay SEO.
Fiiri sida boggagayagu u shaqeeyaan oo waxaad ka heli doontaa balooggeygu waxyar baa la gaari karaa… laakiin Jason wax badan ayuu qaran ahaan ugu hawlan yahay aagga warbaahinta bulshada. Waa soojeedin heer sare ah (Weli waan baranayaa) iyo aftahan madadaalo leh. Isaga mudan yahay fiiro gaar ah. Waxaan u maleynayaa in iska indhatirka fursada ay dhaawaceyso awooda boggiisa - mana ka faa'iideysanayo sidoo kale.
FIIRO GAAR AH: Waxaan diray Jason eBookkayga cusub lacag la’aan. Waxaan rajeynayaa inuu badalo maskaxdiisa. 🙂
Ghostblogging waa xirfad sharaf leh
Goorma ayey tahay markii ugu dambeysay ee maamulahaagu helo dalacaad shaqadooda? Miyaad fadhiisatay adigoo aan nacas ahayn markay jaranjarada kor uga soo kacayaan? Mise wax yar bay ku dhibtay oo aad ka caawisay inaad halkaas dhigto? Taasi waa waxa Ghostbloggers do. Ghostblogging ma aha eray wasakh ah mana aha xirfad wasakh leh, waa mid layaableh. Ghostblogger weyn ayaa baaraya isha wuxuuna si sax ah u qoraa qoraalada iyaga oo ka wakiil ah.
Waxaan u maleynayaa inaan haysto madax aad u weyn oo aan taas sameyn karo. Waxaan rabaa amaah halka ay mudan tahay amaahdu!
Ma been abuurbaa? Ma hufanbaa? Ma aaminsani inay tahay! Haddii aan fadhiistay oo aan waraysi kula yeeshay oo aan qoray dhammaan jawaabihiina - laakiin waxaan u qoray si aftahannimo leh iyo qaab madadaalo leh, taasi ma waxay kaa dhigaysaa inaad qof ka yar tahay? Waxaa jira magacyo waaweyn oo ku jira adduunka wax lagu qoro oo aan qorin wax iyaga u gaar ah - Waan necbahay inaan warka kuu sheego!
Ilaa iyo inta laga hadlayo qoraaladaas blog-ku waa fariintaada, muxuu qofna u daneynayaa in qof kale qoro? Ma ogtahay taas Khudbadii caleemo saarka Obama waxaa qoray nin 27 jir cadaan ah oo jooga Starbucks? Taasi miyey badalaysaa aragtidaada Obama? Ma been abuurbaa? Taasi ma ahayn mid daahfuran?
Uma maleynayo sidaas… Waxaan u maleynayay inuu ahaa hadal layaableh, shakigana kama qabo inuu Obama ula jeeday kalmad walba oo uu dhaho!
Tags: natiijooyinka ganacsigaamniga emaylkadhoofintaDalbashada Cuntadadhise arjiga mobiladaReservations
Chris Brogan wuxuu ruxay BlogIndiana
Wanaagsan kordhinta wadahadalka iyo dooda saaxiibtinimo ee uu dhaliyay Jason Falls ee #blogindiana saaka. Dhibaatadayda socota wali waa inaan wali kugu raacsanahay, Jason iyo Chris. Waxaan aaminsanahay inay dib ugu laabaneyso jabinta sharciyada. Haddii Jason uusan dan ka lahayn raadinta taasna isaga ayaa u shaqeynaya, sidaas ha ahaato. Haddii uusan dan ka lahayn cidda aan helayn, haddii aysan ahayn diidmo xun, sidaas ha ahaato. Haddii qorayaasha kale, oo ay ku jiraan naftaada, Chris, aniga ama macaamiishaydu ay rabaan inay ka faa'iidaystaan ​​awoodda baloog gareynta ee SEO, game on. Doodda sii wad, waxaan jeclahay inaan wax ka barto wadahadalka iyo kuwa ka qayb qaadanaya.
Doug, aad u macquul ah oo si fiican u yidhi. Waan hubaa in Jason uu khaladka jidkiisa ku arki doono qancin sidan fekerka leh. Waxa laga yaabaa inuu ka fekerayo tusaalooyinka ugu culus marka ay timaaddo qoritaanka SEO iyo ghostblogging. Waxaan u badan tahay inaan ku raacno isaga. Waxay la mid tahay isbarbardhiga wax-ku-oolnimada, daandaansiga ama madadaalada, xayaysiinta telefishanka iyo kuwa uu leeyahay Peter Francis ee aad taqaan - ama "si toos ah u codso wejiga." Waxaan helnay inaan helno suuq geyn caqli badan.
Agoosto 14, 2009 saacaddu markay ahayd 4:28 PM
Laba qoraal oo dhaqso ah… halka Bell uusan qorin buug ku saabsan sida loo isticmaalo taleefanka, heshiis ogolaansho ah ayaa dhex maray shirkadiisa iyo Western Union oo aan loo isticmaali karin in lagu isticmaalo telefon. Taasi waa intaas oo ay ku fiicnayd ilaa uu Thomas Edison ikhtiraacay badhanka kaarboonka gudbiyaha (makarafoonka) kaas oo ka dhigay hadalka masaafada dheer mid wax ku ool ah. Isagoo ka hadlaya khudbadaha madaxweynaha, Edison wuxuu wax yar ka bartay wax ka qabashada saxaafadda ka dib markii uu si buuxda dib ugu soo celiyey khudbaddii madaxweyne Andrew Johnson khudbaddii uu jeediyey bishii Sebtember 11, 1866 ee Associated Press. Ilaa iyo inta ghostbloggers ay ka dhigayaan madaxdooda inay u muuqdaan kuwo ka fiican sida ay dhab ahaan yihiin, tababaraha ma caban doono.
Agoosto 16, 2009 saacaddu markay ahayd 6:46 PM
Ka hadal Xad dhaaf Macluumaad ah! lol.
Waxaa xiiseynayay aqrinta ku saabsan Madaxweyne Andrew Johnson oo inta badan ma seexan karin iyadoo sii wadaysa ka fiirsashada mudnaanta kartidiisa hadalka bulshada. TY Mike, waligey kuma dhagin fikirka suurtagalka ah ee Thomas Alva inuu ka dambeeyo aftahanimada aftahanimada ee Johnson loo maleynayo.
Horeyn ugu boodayaa mowduuca maanta; Miyaynaan ahayn inaynu qiyaasi karno inta badan dadka caanka ah inay bixiyeen qaddar wanaagsan oo ka mid ah farriimahooda dadweynaha qaab mooddo ah? Hadda waxaa naloo soo sheegay qoraal-gacmeedku inuu jiray xilligii Madaxweynihii ugu horreeyay Johnson laakiin yaa si sax ah u garanaya markii farsamadaasi dhalatay.
Su'aashaas waxaan kuugu dhaafayaa aniga oo leh su'aal aniga ii gaar ah… waa kuma qoraaga (yada) dhabta ah ee Kitaabka Quduuska ah? Aniga iima muuqan inaan Ilaah ama Ciise ahaa haddana waxaan u aqbalnaa "Erayga Ilaah." Kuwaas oo khalday GHOSTWRITER "S IN THE SAMA" xitaa shaqeeynaayeen 2,000 oo sano kahor!
Waxaan u maleynayaa inaanan si fudud u seexan doonin caawa maadaama aan horeyba u bilaabay layaabka ah in Karr uu bixiyo ruuxa wax qora iyo sidoo kale in Ilaah uu bixiyay lacagtiisa.
Agoosto 18, 2009 saacaddu markay ahayd 1:04 PM
Waxaa laga yaabaa in ciribtiriddu tahay xirfad sharaf leh, laakiin qofka adeegsada adeeggaas oo kale sharaf maleh. Uguyaraan daacad uma ahan akhristayaashiisa.
Agoosto 19, 2009 saacaddu markay ahayd 8:00 PM
Post weyn Doug. Waxaan ka fikirayay arintan mudo dheer hada. Xaqiiqdii waxaan qoray qoraal maalin dhaweyd oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo muhiimada raadinta.
Anigu ma aan joogin barta internetka ee Indiana, markaa ma haysto meel tixraac ah oo ku saabsan wadahadalkan gaarka ah. Waxaan u maleynayaa in muuqaalka raadintu runtii muhiim yahay. Fikirkaygu wuxuu yahay inay jiraan 3 arrimood oo muhiim u ah helitaanka muuqaalka raadinta, maadaama ay laxiriiraan baloog garaynta.
Midka koowaad waa mid ku qanacsan. Markii balooggaygu gaadhay in ka badan 100 qoraal waxaan bilaabay inaan ku guulaysto raadin badan oo ereyo kala duwan ah. Waxaan kaliya sawiri karaa inta baaritaan ee aad ku guuleysan laheyd kun ka badan!
Midda labaad waa is-hagaajin gudaha ah. Waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay in la hubiyo in URL-kaaga permalinks, astaamaha cinwaanka, cinwaanka cinwaanka, iyo guud ahaan waxyaabaha ku jira ay ku jiraan ereyada muhiimka ah si qoraaladaada looga helo Google. Waxaan u arkaa inay tani fududahay in la sameeyo haddii aad fahanto aasaasiga aasaasiga ah.
Qodobka seddexaad ee ugu muhiimsan waa xiriiriyeyaasha, waana inaan aaminsanahay in sumaddaada laga dhisayo baraha bulshada ay tahay FAR habka ugu fudud ee dadka looga dhaadhiciyo inay kugu xiriiraan.
Marka miyaan ku raacsanahay Jason? Haa iyo maya.
Wax macno ah malahan aniga inaan gebi ahaanba iska indhatiro habeynta gudaha ee bartaada. Maxaad u rabin INAAD Google ku hesho!
Laakiin, waxaan u maleynayaa inay macno badan samaynayso in xoogga la saaro joogitaankaaga bulsho, helitaanka ixtiraamka saaxiibbada wax ku qora, helitaanka awoodda isku xidhka, taas oo habka loo maro ay kaa caawin doonto raadintaada mustaqbalka fog.
Waxa iga xanaajiya ayaa ah marka dadku u dhaqmaan sida sababta kaliya ee ay tahay inaad wax u qorto waa inaad ku guuleysato raadinta. Kaliya waa inaan aaminsanahay inay muhiim tahay in xoog la saaro istiraatiijiyaddaada bulshada. Haddii aad wax badan ku qorto boggaaga adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah waxaad ku guuleysan doontaa baaritaanno fara badan si kastaba ha noqotee.
Hadda, Ghostblogging ma tahay xirfad sharaf leh? Hubaal! Ma la qiyaasi karaa? Maya, maahan inaad maareeyso hay'ad ghostblogging ah. Hadaad tahay blogger-ka, wax badan oo shaqo ah waad qaban kartaa sidaa darteed waxaad sameyn kartaa lacag aad u badan.